चीनले सरक्क उचालेर सार्यो‌‌ ७६ सय टनको ५ तले विशाल भवन, आखिर कसरी ? (हेर्नु`होस् भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/चीनले सरक्क उचालेर सार्यो‌‌ ७६ सय टनको ५ तले विशाल भवन, आखिर कसरी ? (हेर्नु`होस् भिडियो)
चीनले सरक्क उचालेर सार्यो‌‌ ७६ सय टनको ५ तले विशाल भवन, आखिर कसरी ? (हेर्नु`होस् भिडियो)
चीनको सां’घाई शहरका इन्जि’नियरले ७ हजार ६ सय टनको एउटा विशाल भवन’लाई उठाएर अर्को स्थान’मा सारेका छन्। उनीहरूले सन् १९३५ मा बनेको लागेना प्राथ’मिक विद्याल’को ५ तले भ’वनलाई प्रविधि प्रयोग गरी उ’ठाएर केही पर सारेका हुन्।
स्थानीय प्रशा’सनका अनुसार यस पुरानो भवनन’जिकै नयाँ आयोजना सुरु भएको छ। त्यसैका लागि यो भवन अलि पर सार्नुपरेको हो। चीनका इन्जिनिय’रसँग यो भवन भत्का’उने विकल्प पनि थियो, तर उनीले यस पुरानो भवनलाई जस्ता’को तस्तै के’ही टाढा सार्ने निर्णय गरेका हुन्।
चिनि’याँ सरकारी सञ्चारमा’ध्यमका अनुसार इन्जिनि’यरको एक टोलीले प्रविधिको सह’योगमा भवन उठाए र १९८ रोबोटका खुट्टाका मद्दतले केही पर लगे। स्थानीय सञ्चार’माध्यमका अनुसार क्रंकि’टबाट बनेको उक्त भवन पहिलेको ठाउँबाट करिब ६२ मिटर सारिएको हो।
चीनको सरकारी टीभी सी’सीटीभी न्युज नेटव’र्कका अनुसार भवन सार्ने प्रक्रिया १८ दिनमा पूरा भएको हो। यही अक्टोबर १५ तारिख भवन सार्ने काम सम्पन्न भएको हो ।उज्या’लो अनलाइन